...tti maxxanfame 9:11 26 Hagayya 20219:11 26 Hagayya 2021
'Afaan beekumsa haaraa argachuuf furtuudha' - Dubartii Chaayinaa Afaan Amaaraa barsiistu
Video caption: Dubartii Chaayinaa Beejingitti Afaan Amaaraa barsiistuDubartii Chaayinaa Beejingitti Afaan Amaaraa barsiistu
...tti maxxanfame 3:59 26 Hagayya 20213:59 26 Hagayya 2021
Dubartii Chaayinaa Beejingitti Afaan Amaaraa barsiistu
Maqaanshee Nig Chuungaay jedhamti. Lammii Chaayinaa yoo taatu, isheen garuu wallakkaan lammii Itoophiyaatii jetti. Kun dhiigaan lammummaa Itoophiyaa qabaattee osoo hintaane, afaan Amaaraa waan dandeesseefidha.
...tti maxxanfame 5:42 22 Caamsaa 20215:42 22 Caamsaa 2021
Teeknooloojii afaanoota addunyaa hunda ni hiikaa jedhame abdatame
Dhuguma teeknooloojiin afaanoota addunyaa kanaa hunda hiikuuf dandeessisuu argamu danda'aa laata?
...tti maxxanfame 4:35 2 Bitooteessa 20214:35 2 Bitooteessa 2021
Kitaabni mata-dureen isaa 'Malkaa Og-Afaan Oromoo' jedhu Guraandhala 2021 Naayiroobii, Keeniyaatti maxxanfamee tibbana eebbifameera.
...tti maxxanfame 5:12 28 Guraandhala 20215:12 28 Guraandhala 2021
Afaan Oromoo afaan og-barruu, daldalaa, teeknolojii fi caasaalee garaagaraa ta'uun hanga barbaadamu akka hin dagaagneef, danqaraan seenaa fi siyaasaa akka irra ture hayyoonni hog-barruu fi dhimmoota eenyummaa ni himu.
...tti maxxanfame 5:45 14 Guraandhala 20215:45 14 Guraandhala 2021
'Waggoota 20'f sababan maqaakoo dhokfadheef'
Maqaan keenya eenyummaan keenya kan ittiin baramuudha. Maqaan keenya beekamnaan eenyummaan keenya sirriin ifa ta'a. Kanaafuu, namoota kaan gammachiisuuf jecha maqaa keenya yoo geeddarannu dhiibbaan inni qaqqabsiisuu danda'u attamiin ibsama?
...tti maxxanfame 6:27 13 Amajjii 20216:27 13 Amajjii 2021
Duulli Afaan Oromoo sirnaan barreessuufi dubbachuun guddina afaanichaatiif murteessaa ta'uu akeeku tokko tibba kana miidiyaa hawaasaa irratti gaggeefamaa jira.
...tti maxxanfame 5:30 28 Sadaasa 20205:30 28 Sadaasa 2020
Jecha yookiin maqaa harraba keessan irra jiru yaadachuuf ifaajuun rakkoo waa yaadachuu jedhamee ramadamuu dhabuu danda'a, haala salphaan ittisuunis ni danda'ama.